သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ရိန်းရဲ့ သီချင်းအယ်ဘမ်သစ် ဒီဇင်ဘာမှာ ထွက်မယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ရိန်းရဲ့ သီချင်းအယ်ဘမ်သစ် ဒီဇင်ဘာမှာ ထွက်မယ်
BUSAN, SOUTH KOREA - OCTOBER 07: Actor Rain attendsapress conference for 'Soar Into The Sun' during the 16th Busan International Film Festival (BIFF) at Shinsegae Department Store on October 7, 2011 in Busan, South Korea. The biggest film festival in Asia showcases 307 films from 70 countries and runs from October 6-14. (Photo by Chung Sung-Jun/Getty Images)
သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ရိန်းရဲ့ သီချင်းအယ်ဘမ်သစ် ဒီဇင်ဘာမှာ ထွက်မယ်
တောင်ကိုရီးယား နာမည်ကျော် သရုပ်ဆောင်၊ အဆိုတော် ရိန်းဟာ ဒီဇင်ဘာလမှာ သူရဲ့တေးအယ်ဘမ်အသစ် ထွက်ရှိမယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ရိန်းဟာ သူရဲ့ နောက်ဆုံးတေးစီးရီး အယ်ဘမ် Rain Effect ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ထွက်ခဲ့ပြီး ၄ နှစ် နီးပါး ကြာပြီးမှ နောက်ထပ်တေးအယ်ဘမ်သစ် ထွက်ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုအချိန်မှာ ရိန်းဟာ တေးအယ်ဘမ် အသစ်အတွက် အသံသွင်းပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ အယ်ဘမ် အသစ်ထွက်ရှိဖို့ နောက်ဆုံးအဆင့်ကို ရောက်ပြီလို့ ရိန်းက ပြောပါတယ်။ ရိန်းဟာ အခု တေးအယ်ဘမ်အသစ်ကို အဆိုတော် တိုက်ဝမ်နဲ့ တွဲဖက်ကာ သီချင်းရေးသားခဲ့ပါတယ်။
ရိန်းဟာ တိုက်ဝမ်နဲ့တွဲပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တို့မှာ တေးအယ်ဘမ်တွေ လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ရိန်းဟာ သရုပ်ဆောင် ကင်တေးဟီနဲ့ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက သမီးဦးလေး မွေးဖွားမှုအတွက် ပျော်ရွှင်မှုနေခဲ့တယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား သတင်းတွေက ဖော်ပြပါတယ်။
သရုပျဆောငျ၊ အဆိုတျော ရိနျးရဲ့ သီခငျြးအယျဘမျသဈ ဒီဇငျဘာမှာ ထှကျမယျ
တောငျကိုရီးယား နာမညျကြျော သရုပျဆောငျ၊ အဆိုတျော ရိနျးဟာ ဒီဇငျဘာလမှာ သူရဲ့တေးအယျဘမျအသဈ ထှကျရှိမယျလို့ ပွောလိုကျပါတယျ။
ရိနျးဟာ သူရဲ့ နောကျဆုံးတေးစီးရီး အယျဘမျ Rain Effect ဟာ ၂၀၁၄ ခုနှဈက ထှကျခဲ့ပွီး ၄ နှဈ နီးပါး ကွာပွီးမှ နောကျထပျတေးအယျဘမျသဈ ထှကျရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာ ရိနျးဟာ တေးအယျဘမျ အသဈအတှကျ အသံသှငျးပွီးသှားပွီ ဖွဈပါတယျ။ အယျဘမျ အသဈထှကျရှိဖို့ နောကျဆုံးအဆငျ့ကို ရောကျပွီလို့ ရိနျးက ပွောပါတယျ။ ရိနျးဟာ အခု တေးအယျဘမျအသဈကို အဆိုတျော တိုကျဝမျနဲ့ တှဲဖကျကာ သီခငျြးရေးသားခဲ့ပါတယျ။
ရိနျးဟာ တိုကျဝမျနဲ့တှဲပွီး ၂၀ဝ၈ ခုနှဈ၊ ၂၀၁၀ ခုနှဈတို့မှာ တေးအယျဘမျတှေ လုပျခဲ့ဖူးပါတယျ။ ရိနျးဟာ သရုပျဆောငျ ကငျတေးဟီနဲ့ လကျထပျခဲ့ပွီး ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးက သမီးဦးလေး မှေးဖှားမှုအတှကျ ပြျောရှငျမှုနခေဲ့တယျလို့ တောငျကိုရီးယား သတငျးတှကေ ဖျောပွပါတယျ။
Previous articleတရားစွဲခံထားရတဲ့ ကလေးစစ်သားဟောင်း ကို လွှတ်ပေးဖို့ တောင်းဆို(ရုပ်/သံ)
Next articleကမ်းခြေလုံခြုံရေးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ ဧရာဝတီ-ရခိုင် ကမ်းခြေပါတ်လမ်းဖောက်လုပ်သွားတော့မှာဖြစ် (ရုပ်/သံ)